အိပ်ရာခင်းတွေကို မလျှော်ဖွပ်ဘူးဆိုရင် ဘာတွေကြုံရမလဲ? - Lifestyle Myanmar
အိပ်ရာခင်းတွေကို မလျှော်ဖွပ်ဘူးဆိုရင် ဘာတွေကြုံရမလဲ?
ကျွန်မတို့ဟာ ဘဝရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံအထိကို အိပ်စက်ခြင်းမှာ သုံးကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးက တစ်နေ့တာအတွင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို သက်မှတ်ပေးပါတယ်။
လူတိုင်းက အိပ်ရာခင်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အိပ်ရတဲ့အခါ စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ အိပ်ရာခင်းတွေကို မသန့်ရှင်းရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား?
အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျွန်မတို့အိပ်တဲ့အတွက် ဆီ၊ အရေပြားဆဲလ်နှင့် ဖုန်အညစ်အကြေးကဲ့သို့သော အကြွင်းအကျန်ပစ္စည်းတွေက ကျွန်မတို့အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျန်နေနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အညစ်အကြေးတွေ စုပုံလာပြီး ကျွန်မတို့ အိပ်ရာဟာ ပိုးမွေးမြူရေးစခန်းကြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဝက်ခြံပေါက်ပြီး အသားအရေယားယံလာပါတယ်
သင့်အသားအရေပါ်မှာ ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတာကို သတိပြုမိပါသလား? သင့်ခေါင်းအုံးက ညစ်ပတ်နေတာပါ။ နေတိုင်းအသုံးပြုခြင်းက အရေပြားဆဲလ်သေ၊ အဆီနှင့် ဘက်တီးရီးယားတွေ စုပုံနိုင်ပြီး ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကို ဦးတည်စေတဲ့ ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အိပ်ရာခင်းနဲ့ ခေါင်းအုံးတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေက အသားအရေကို နီမြန်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေက ညစ်နွမ်းနွမ်းဖြစ်နေတယ်၊ ဝက်ခြံထွက်နေတယ်လို့ ခံစားရရင် ၂ရက်မှ ၃ရက်တိုင်း ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို လဲပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ dust mites တွေကနေ ဓါတ်မတည့်မှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်
ညဘက်မှာ နှာချေပြီး မျက်လုံးတွေယားယံနေပါသလား? သင်ဓါတ်မတည့်မှုကို ခံစားနေရတာပါ။ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သင့်အိပ်ရာခင်းမှာနေထိုင်တဲ့ dust mites လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်မှုန့်ထဲက အကောင်လေးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလာ့ဂျစ်နဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဒီ dust mitesလေးတွေဟာ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဓါတ်မတည့်မှုကို ရှောင်ရှားဖို့ သင့်အိပ်ရာခင်းတွေကို ရေနွေးနဲ့ သေချာလျှော်ပါ။
၃။ အိပ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနှင့်အတူ အိပ်စက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
တစ်ချို့က အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို အိပ်ရာထဲ ခေါ်သိပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင် သင်သတိထားသင့်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အချို့သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဟာ မွှားတွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့အတွက် Lyme ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်တာကြောင့် ဒီ ကြမ်းပိုးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်အမွေးတွေက dust mites တွေကို သင့်အိပ်ရာမှာ နေထိုင်ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခွေးလေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေကိုကို အိပ်ရာထဲမှာ သိပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် အိပ်ရာခင်းတွေကို ပုံမှန်လျှော်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ သန့်ရှင်းမှုကို အမြဲထိန်းသိမ်းပါ။
၄။ ဦးရေပြားကို ယားယံစေပါတယ်
ပူနွေးပြီး စိုထိုင်းတဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေက dermatophytes လို့ လူသိများတဲ့ မှိုတွေအတွက် နေအိမ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှိုတွေက ဦးရေပြားပေါ်မှာ ယားယံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ဘောက်တွေ ထလာတာတို့၊ ပွေးပေါက်လာတာတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို သေချာလျှော်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၅။ မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်
pink eye လို့အများသိကြတဲ့ မျက်ခွံအတွင်းသား ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါရှိခဲ့ရင် သင့်အိပ်ရာခင်းတွေကို အပြစ်တင်သင့်ပါပြီ။ ဒါက အထူးသဖြင့် ခေါင်းအုံးတွေနဲ့ အိပ်ရာခင်းတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးနီမြန်းတာ၊ ယားယံတာ ခံစားရတာမျိုးဆိုရင် အိပ်ရာခင်းတွေနဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို လျှော်ဖွပ်ပြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အိပ်ပါ။ အိပ်ရာခင်းတွေကို လျှော်တဲ့အခါ ပိုးသေအောင် ရေနွေးကိုသုံးပါ။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်လောက်လျှော်ပါ။